Nohamafisin’ireo lehiben’ny mpitandro ny filaminana fa taxi-be afaka miasa hatramin'ny 03 Ora tolakandro; ny kamiao izay mitondra entana rehetra dia afaka mivezivezy manomboka amin'ny 03 ora tolakandro ka hatramin'ny 11 ora alina. Ary afaka mivoaka sy miditra manomboka amin'ny 04 ka hatramin'ny 06 ora maraina. Toy izany koa ny kamiao izay mitondra legioma dia afaka miditra amin'ny 04 ka hatramin'ny 06 ora maraina;
Ny fiara mitondra marary manao vonjy aina sy mitondra razana dia afaka miampita ny sakana. Ireo izay tsy manaraka ny fepetra dia averin-dalana avy hatrany.